Sida loo sameeyo sawirro asal ah Instagram | Androidsis
Sida loo sameeyo sawirro asal ah barta 'Instagram'
daniplay | | Codsiyada Android, Tababarada
Instagram waxay noqotay meel aan ku wadaagi karno sawiradeena iyo fiidiyowyada lala isticmaalayo, haddii ay yihiin qoys, saaxiibbo iyo guud ahaan kuwa raacsan. Shabakada bulshada ayaa jabisay diiwaanka dadka isticmaala firfircoon, iyadoo in kabadan 1.000 bilyan sanadka 2020 ayna doonayaan inay ka badnaadaan tiradaas sanadka 2021
Qaadashada sawirro asal ah oo loogu talagalay Instagram waa adigoo raacaya talooyin iyo tabaha yar, gaar ahaan haddii aad rabto in waxyaabaha ku jira ay noqdaan kuwo caan ku ah barnaamijka caanka ah. Dadku waa inay soo jiitaan waxa ay arkeen, barta Instagram waa inay macno sameysaa haddii aad rabto inaad caan ku noqoto waqti ka dib.
1 Sawirka muuqaalka asalka ah
2 Oraahda asalka ah
3 Goobaha asalka ah ee sawiradaada
4 Sawirada asalka ah ee dadka
6 Sawirada guriga
Sawirka muuqaalka asalka ah
Sawirka muuqaalka ee shabakada bulshada ee Instagram wuxuu noqon doonaa xiriirka ugu horreeya ee isticmaalayaasha kula socda, waa lagama maarmaan in lagu sifeeyo sawir asal ah oo ka duwan kuwa kale. Qaabka sawirada badanaa waa laba jibbaaran qaabka 1: 1, inkasta oo ay jiraan codsiyo u oggolaanaya soo gelinta sawirrada oo la soo koobi karo.
Tilmaamaha ugu horreeya waa inuu ka muuqdo bartamaha sawirka, cabbirka muuqaalka ayaa muhiim ah iyo sidoo kale iskumid, tixgeliya jaantusyada sawirka oo kiciya aragtida maaddada. Sawirka muuqaalka wanaagsan waa midka aan ka dhergin walxaha, waxaa habboon in la isticmaalo qaabka panoramic-ka.
Xusuusnow inaad doorato sawirro leh cabbiryo horay loogu soo xulay Instagram, talooyinka waa 100 x 100, 110 x 110 28 x 28 ugu yar si loo isticmaalo xallinta muujinta. Si loo isticmaalo sawir laba jibbaaran, ballaca iyo dhererka xallintu waa inay ahaadaan 1.080 x 1.080.
Oraahda asalka ah
Sawirro aan qoraal lahayn uma eka isku mid, tan awgeed waa muhiim inaad lasocoto sawir waxa aad rabto inaad dhahdo daqiiqadaas, ama waxa lamid ah, weedh haboon. Helitaanka ereyadu had iyo jeer ma sahlana, in kasta oo mararka qaarkood ay fiican tahay in la abuuro dareenka kuwa leh farriinta.
Waxaa jira weedho badan oo asal ah oo aan dooran karno si aan u helno jacayl ku filan, tan waxaa suurtagal ah in lagu soo jiito bulshada guud, gaar ahaan kuwa adiga ku raaca. Weedh kastaa waxay ku xirnaan doontaa waqtiga, marka waa inaad doorataa mid waxay kuxirantahay sawirka aad go aansatay inaad rakibato waqtigaas.
Qaar ka mid ah weedhaha asalka u ah Instagram waa kuwan soo socda:
In waxa ay tahay inay dhacaan, ay kula dhacaan adiga
Qof kastaa wuu xakamayn karaa jacaylka mooyee kan dareemaya
Wadnuhu wuxuu leeyahay sababo uusan sababtu fahmin
Cabsidaasi kaaama dhigeyso inaad naftaada ku weydo inta aad jidka ku sii jirto
Ugu dambayntiina waxaad garwaaqsatay in howlgabnimadu aysan kaa lumin, waa ay ku jeceshahay
Mararka qaarkood way adag tahay in la fahmo in si aad dhinac u hesho, waa inaad mid kale ka tagtaa
Saaxiibka dhabta ahi waa kan aad ku dhiiran karto inaad run ahaantii la noolaato
Qof kastaa wuu kaa oohin karaa, laakiin waxay u baahan tahay maskax si aad u dhoolla caddayso
Goobaha asalka ah ee sawiradaada
Meel kasta way wanaagsan tahay in sawir fiican laga qaado, laakiin waxaa jira aagag ka wanaagsan oo laga faa'iideysto oo aad caan ugu noqoto kuwa raacsan. Guushu waxay ku jirtaa xulashada boos, midkood magaaladaada ama meel ka baxsan, haddii aad doorato tan dambe, waxaa jira in yar oo aad u dhibic "instagrammable" ah.
Isbaanishka Machu Pichu: Buuraha La Masca, oo ku yaal Tenerife, waxay umuuqdaan ilaahyo ilaaliya dadka kunool. Xeebo iyo dhagaxyo doog badan leh oo leh geedo waa Masca. Gees taariikh u leh burcad-badeedda, laga bilaabo magaalada iyo waddo dheer ka dib waxaad gaadhay xeeb qurux badan.
Macdanta dahabka ah: In El Bierzo (León) addoommadii Boqortooyada Roomaanku waxay u fureen inay soo saaraan dhammaan dahabka. Waxay yihiin bannaanka, oo ay ku daboolan yihiin xabadka iyo geedku. Waxaa loo magacaabay inay tahay Goobta Dhaxalka Adduunka ee 1997.
Xeebta Sakoneta: Xeebta Sakoneta waa dabeecad dabiici ah, hirarka ayaa calaamadeeyay muuqaalkan. Waxay ku taalaa Deba waana mid ka mid ah waxyaabaha dhifka ah isla mar ahaantaana aad u soo jiidasho badan. Waxay ku taal Guipuzkoa, oo ah magaalo ku taal xeebta Basque. Waa inay deggaan qiyaastii 5.000 oo qof.
Mountain, xeeb ama taallo kasta: Waxaa jira dad badan oo go'aansada inay sawiro iyo fiidiyow ka qaadaan si ay ugu soo dhigaan Instagram buur, xeeb ama taallo. Mid kasta oo iyaga ka mid ah ayaa loo isticmaali karaa in lagu soo rogo shaashad isla markaana uu ku helo waxyaabo badan oo jecel sawirka la galiyay.
Sawirada asalka ah ee dadka
Shaki la'aan, qaadashada sawir fiican waxay ka dhigan tahay adeegsiga kamarad wanaagsan, xaaladdan oo kale waxaad ku ciyaari kartaa mala-awaalkaaga, adigoo adeegsanaya taleefan ama kamarad dijital ah. Waxaa jira fikrado wanaagsan oo aad kuqaban karto sawirro kala duwan, ama adoo hagaajinaya dareemaha, ku darista walxaha dushooda iyo waxyaabo kale oo badan.
Si aad u qaadatid sawirrada asalka ah ee dadka waxaad isticmaali kartaa bac balaastik ah oo hufan, si adag u qabso oo u samee qaab muraayadda si ay u soo qaadato muuqaal, ku habboon haddii aad sawir ku qaadaneyso muuqaal muuqaal ah. Waxa kale oo aad sameyn kartaa tirooyin kala duwan oo aad ku dhajin kartaa dusha leniska, waxaad ku qaadi kartaa sawir leh qaabab, tan waxaad ku saari kartaa qayb ka mid ah masraxa sawirrada.
Waxaad sidoo kale ku ciyaari kartaa hooska, tan waxaad u sameyn kartaa walxo, abuuri kartaa milicsiga ka dibna ka dhigi kartaa mowqif leh boos si aad uga dhigto mid macquul ah. Waxaad isticmaali kartaa dhalo hufan oo waxaad abuuri kartaa saameyn muraayadaha, iyo sidoo kale kuwa kale sida haddii ay ahaan lahayd spyglass, mala-awaalku wuxuu noqon karaa mid aan xad lahayn oo laga qaado sawirrada asalka ah.
Isticmaalidda sawir ka duwan sawir kasta waxay keeneysaa natiijooyinOgaanshaha kuwa ugu fiican ayaa kaa dhigi doonta inaad kasbato waxyaabo badan oo jecel iyo wixii ka sarreeya oo dhan ku dar kuwa raacsan barta Instagram. Muhiimadu waa in la isticmaalo midka guusha noqda si markaa aakhirka aad u noqon kartid saamile.
Mid ka mid ah sawirada loogu adeegsiga badan yahay ee 'Instagram' ayaa ah in la weyneeyo muuqaalka, sawir gacmeedyada la jarjaray ayaa ka caawinaya sidan sameynta iyo diiradda muuqaalku waa lama huraan haddii aad rabto inaad sawir fiican qaado Muuqaal kale oo muujinaya natiijooyin wanaagsan ayaa taagan muuqaal ahaan, gaar ahaan markaad rabto inaad u ekaato mid khafiif ah, halkan sawirka ayaa lagu hagaajin karaa saacadlaha ama u adeegso qof kale inuu qaado.
Kuwa kale ee badanaa shaqeeya waa inay fariistaan ​​oo muujiyaan muuqaalka muuqaalka, laakiin isagoon ka bixin xarunta si qofku had iyo jeer ugu muuqdo sawirka, ha ahaado dhulka, dhagaxa, iwm. Mawqifka waa la beddeli karaa, ha ahaato booska nooca yoga, lugaha laaban ama qaabab kala duwan oo loogu sawiro shabakadda bulshada
Mid ka mid ah dejimaha ugu habboon ee laga qaado sawirrada asalka ah oo lagu dhajiyo barta 'Instagram' Waa guri kuu gaar ah, tan tan ugu fiican ayaa ah inaad qurxiso meelaha aad sawirrada ka qaaddo. Wax badan ayaad ka heli kartaa cunsur kasta, tan darteed waxaad u baahan tahay male-awaal yar.
Ma jiraan wax ka qabow oo ah inaad sawir la gasho xayawaankaaga, ha ahaato eey, bisad ama kan aad la nooshahay, waayo tan marwalba hagaaji sawirka labadaba si ay uga soo baxdo asalka. Muraayadda is-qaadashadu waa isbeddelTan waxaad kaliya u baahan tahay inaad fariisato muraayada horteeda, isticmaal moobilkaaga oo aad sawir ka qaadatid, inbadan oo kamid ah waxay ku guuleystaan ​​shabakadan bulshada.
Soo qabashada sawir dabiici ah waa shay kale oo dadku jecel yihiinTan waxaad u baahan tahay oo keliya inaad qaadato dhar raaxo leh, taleefanka oo aad ku qabato wax walba saacadda lafteeda, waxaa ugu wanaagsan inaadan isticmaalin kamaradda hore. Waxyaabaha caadiga ah sidoo kale waxay jecel yihiin, waxaad isticmaali kartaa vinyl, diiwaanka farshaxanka aad jeceshahay iyo hiwaayadaha kale ee aad jeceshahay inaad qabsato oo aad u geliso Instagram.
Sidoo kale waa la isticmaali karaa barnaamijyada sameeya sawir-qaadaha, tafatir sawirada moobaylka, sawirrada cuntada si aad u soo rarto, oo dhan samaynaya sawiro fiican oo mobilka kujira. Sawirada waa la wadaagi karaa si loogu gaaro guul weyn barta Instagram haddii aad ku koraan talooyinkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo sameeyo sawirro asal ah barta 'Instagram'
Spotify ayaa ugu dambayntii ku dhawaaqday nooca 'HiFi' iyada oo aan lumin tayada
Sida dadka loogu casuumo kooxaha Telegram-ka ee leh QR code